Kulamo lagu xalinayo tabasho ay qabaan qaar ka mid ah beelaha oo ka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kulamo lagu xalinayo tabasho ay qabaan qaar ka mid ah beelaha oo ka
MAREEG 23 January 2016
Kulamo lagu xalinayo cabashooyinka qaar ka mid ah beelaha dega gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ayaa ka soconaya magaalada Jowhar halkaasi oo ay taallo gogasho Maamul u sameynta labada gobol.
Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka ah ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii loo xalin lahaa tabashooyinka beelaha qaar ay qabaan, iyadoo ay jirto kulamo gaar gaar ah oo lala yeelanayo qaar ka mid dadka tabashada qabo.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee gobolka Shabeelaha Dhexe Abuukar Maxamed Bacadle ayaa ku soo waramaya in Wasaaradda Arrimaha ay maanta u qabatay beelaha inay ku soo gudbiyaan odoyaasha dhaqanka ee shirka uga qeyb galaya, si loo sii ambo qaado wajiga labaad ee shirka ee dhawaan halkaasi ka furmay.
Ciidamada amniga ayaa si aad ah u adkeeyay nabadgelyada degmada Jowhar ee xarunta Gobolka Shabeelaha Dhexe.
Eedeysanaha lala xiriirinayo Weerarkii Liido oo la sheegay in la qabtay.